musha Africa Singers Don Jazzy Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Biography yaDon Jazzy inotaurira Chokwadi pane yake yehucheche nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Musikana / Wife kuva, Chitendero, Hupenyu Hupenyu uye Hupenyu hwePamoyo.
Zvichitaurwa zviri nyore, chinyorwa ichi chinokutora iwe kubudikidza nenyaya yehupenyu yemuNigerian rekodhi mugadziri kubva pamazuva ake ekutanga achiri mudiki kusvika pazvakazosvika pakuva nemukurumbira.
Don Jazzy, kubva pamazuva ake ekuzvarwa kusvika mukurumbira wake.
Iwe ungadai wakamuona paTV kana kunzwa nezvekunaka kwake. Iye anozivikanwa zvakanyanya nerubatsiro rwake kuMusic Viwanda; kwete muNigeria chete asi muAfrica zvakare.
Don Jazzy mugadziri werekodhi, munyori wenziyo, muzvinabhizimusi, uye philanthropist. Gara wakarongedzwa kunyange patinozarura uye kukupa iwe unonakidza bio yeDon Jazzy.
Don Jazzy Chikoro chevana nyaya:
Kutanga, muNigerian Akazvarwa Muimbi akazvarwa musi we28th waNovember 1982 muSoutheastern chikamu cheNigeria, Umuahia muAbia State.
Mazita ake akazara ndiMichael Collins Ajereh. Don Jazzy anodanwawo kunzi Don Baba J.
Mufananidzo wekutanga waDon Jazzy naamai vake.
Pamberi pekukura kweMusic Star, vabereki vake vakatamira kuGuta rinozivikanwa reAjegunle; iri pamoyo weLagos, Nigeria.
Anodanwa zvakare kunzi AJ Guta, iyo ghetto nzvimbo yaona kugadzirwa kwakawanda kweMimhanzi nyeredzi. Nekudaro, iro guta richakabata chinzvimbo chekusateerera mutemo.
Don Jazzy achiri mudiki.
Yakanga iri muAJ Guta umo Don Jazzy akatanga kuda mimhanzi aine makore mana (4) emakore. Uku kufarira kukuru kwaizomuendesa kuti adzidze kuridza Bass gitare aine makore gumi nemaviri.
Don Jazzy Mhuri kumashure:
Haasi mhuri zhinji dzaizokwanisa kutamira kuLagos, sepanguva iyo vabereki veRekodha vakatama.
Uye saka tinogona kutaura kuti mhuri yake yaive yepakati mhuri. Vakanga vaine zvakakwana zvekuenda nenguva.
Pix yekutanga yaDon Jazzy nemhuri yake.
Don Jazzy Mhuri Kubva:
Tichifunga nezve chokwadi ichocho chekuti akaberekerwa kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva chikamu cheNigeria anogona kukusiya iwe neakadzidziswa kuti muimbi ane tarenda ndiIgbo. Zvino ngatipe iwe shocker.
Baba vaDon Jazzy, murume weIsoko anobva kuDelta State, Nigeria. Asi amai vake iMambokadzi weIgbo hama kubva kuAbia State zvakare kuNigeria zvakare.
Nekuda kweizvozvo, Don Baba murume weIsoko ane midzi yeamai yeIgbo. Uye zvechokwadi muropa rakazara reAfrica neNigerian.
Mepu inoratidza Don Jazzy's Isoko mabviro.
Don Jazzy Dzidzo:
Tisati tataura nezve matangiro akaita basa rake, ngatitarisei kuzvikoro kwaakadzidza. Don Jazzy akapinda mumukurumbira Federal Federal College muIjaniki, Lagos State. Chikoro chesekondari chinotora co-dzidzo system.
Mudiki Don Jazzy panguva yehudiki.
Nguva pfupi yapfuura, Don Baba akanyorera kuAmbrose Alli University kuEkpoma, Edo State. Yakanga iri muEpkoma iyo Muimbi akadzidza Management Zvidzidzo; kuwana Bachelors kukudzwa.
Don Jazzy Biography Nyaya:
Mukufananidza nemugwagwa wake wekurumbira, Munyori wenziyo akadzidza kuridza zvimwe zviridzwa parutivi rweBass gitare. Akaridzawo zvechinyakare uye zvekuridza zviridzwa.
Muenzaniso wezvishandiso zvaakaridza zvinosanganisira Clappers neBass Drum, zvichiteerana. Kuridza zviridzwa izvi kwakabatsira Don Jazzy kudzikisira kushushikana panguva yefundo yake.
Don Jazzy Bio - Mugwagwa unoenda Mukurumbira:
Imwe nguva mugore ra2000, wechidiki Rekodhi muimbi Pakushanya kwake kuUK akagamuchira kukokwa kwakavhurwa kubva kuna Babamunini vake kuti varidze ngoma kuChechi yemuno.
Zvichakadaro Don Jazzy akawana basa kuAmerican fast food Company; McDonald's. Aishanda semuchengeti.
Kuda kwaDon Baba kwemimhanzi, kwakamuunza mukubatana nepfungwa dzakadai saSolek, JJC, Kas, The 419 Squad, uye D'Banj. Ipapo ndipo pakatora Mo'Hits Records yakabatana naD'Banj.
Iyo Mo'Hits Record yakaburitsa vhidhiyo vhidhiyo 'Hapana chakareba chinhu' uye Wande Coal's Mushin kuMoHits. Muunganidzwa weWande Coal unonzi ndeimwe yeakanakisa maalbhamu kubva kuNigeria.
Don Jazzy Biography - Kumuka kune Mukurumbira:
Panguva ino, tichave tichitarisa kumusoro kwekumusoro kupinda muchiedza. Kubudirira kwaDon Jazzy kwakatanga paakawana basa kubva kuAmerica Kanye West seMugadziri paGood Good Beatz.
Nguva pfupi yapfuura, izvi zvaizotungamira kune yake nyowani rekodhi chitaridzi, Mavin Records pa7th yaMay 2012.
Iwo maRekodhi anozivikanwa zvakare saMupfumi Mavin Dynasty kubvira ipapo akaburitsa maAlbum mazhinji anoverengeka uye akasaina vazhinji vaimbi vane tarenda.
Vaimbi vanosanganisira vanofarira Tiwa Savage, Reekado Banks, uye Di'Ja. Zvakare, nziyo dzavo dzinosanganisira Amarachi, Nokusingaperi, Oma Ga, Tora Banana uye Chokoreti, YOLO, uye rwiyo ini ndiri MAVIN.
Kubva ipapo, iyo Mavin simba imba yakaburitsa mamwe akanakisa eku Nigeria hit uye maartist. Kunze kwezvo, iye ane anopfuura zana matragi ekugadzira kuzita rake, achishanda pamwe nevazhinji venzvimbo dzemuno nevekunze.
Iyo ichangovakwa Mavin Creative Studios muLekki, Lagos
Don Jazzy ane musikana here? Mukadzi? Pane chero munhu akakosha here?
Zvakanyanyisa kuenderana nekudanana kwemukurumbira uye hukama hukama. Zvakadaro, isu tinokubatsira iwe mukutsvaga mhinduro dzemibvunzo iyi.
Iyo 'Dorobucci' crooner iri, pasina mubvunzo inobata inopisa kune vakadzi. Kunyangwe iye asina kuroora, anobvuma pachena kuti haasi kumhanyirira kuzviita. Don Jazzy, zvakadaro, anga ari mune angangoita matatu (3) hukama.
Kutanga pane zvakanyorwa ndiFreda Francis; kubva kuEdo state. Ivo vaviri vakamboonekwa muDubai pamuchato mune yakasimba kubata yemifananidzo.
Iwe unogona kunge wakamboona kana kunzwa nezvehukama hwaDon Jazzy nemukakavara mutambi Tonto Dikeh. Zvisinei, kurarama kwenguva pfupi kwainakidza panguva iyoyo.
Iye ane tarenda reMimhanzi Mugadziri anobvumawo kuve neanodakadza Tiwa Savage. Nekudaro, iye anoramba kuve nehukama hwepamoyo naye.
Zvakanakawo kucherechedza kuti mugadziri ane tarenda haana mwana akazvarwa kunze kwewanano; sezvazvinowanzoitika kune vane mukurumbira.
Don anozivikanwawo nenzvimbo yakaratidza kufarira nyeredzi dzevakadzi; vanofarira vaRihanna naLinda Ikeji vese vari muindasitiri yevaraidzo.
Haven akataura zvese izvi; mabhero emuchato anogona kurira Michael Ajereh nemusikana wake; Kerie. Iye Mukadzi, uyo asiri makore anodarika makumi maviri nemashanu ekuberekwa, ndewekutanga Igbo.
Iye zvakare akapedza kudzidza kuYunivhesiti yeBenin. Zvinozivikanwa kuti Kerie akange ashanyira vabereki vaDon Jazzy muDublin, Republic of Ireland, uye akagamuchirwa nemufaro.
Don Jazzy achipenga nemusikana wake.
Don Jazzy Hupenyu Hwemhuri:
Fembera isu tinoziva kuti nhengo dzemhuri dzine simba rakanyanya kukosha pahupenyu hwemwana. Don Jazzy ndomumwe wevazhinji vanozivikanwa vekuNigeria vanokoshesa mhuri uye havambomira pakuzivisa nyika.
Iyo yakasimba Bond yakajeka kwazvo; kubva kuvapa zvipo zvinodhura kuzvinhu zvakapusa sekushongedza hupenyu hwavo hwemagariro.
Kutenda kuvabereki vake, izvo zvakatsigira sarudzo dzake, kutanga kutamba bass gitare achiri mudiki.
Nezve Baba vaDon Jazzy:
Vabereki, vanoti minhenga yekuti vana vabhururuke. Iye zvino taigona kutaura zvakafanana nababa vaDon Jazzy.
Izvo zvakakodzera kuziva izvo, mazita ake akazara ndiCollins Ifeanyi Owuneme Ajere Enebeli. Iye ane hunhu hunoratidza mune yekuratidzira bhizinesi renyika; hapana mubvunzo kuisa nzira iyo Don Jazzy yaizotevera.
Collins Ifeanyi muzvinabhizimusi akabudirira uye maneja wekugadzira. Iye zvakare Mutungamiriri weNigerian Artiste Manager Association uye akasainwa sa "Sekuru veMavin Records."
Kunyangwe pazera ramakore makumi matanhatu, baba vemberi mugadziri wemimhanzi muNigeria vakabata maBachelors's Degree muFirimu neTerevhizheni kugadzirwa. Dhigirii raibva kuDundalk Institute of Technology, Ireland.
Baba vaDon Jazzy, Marvin Sekuru pamhemberero yake yekupedza kudzidza kubva kuDundalk Institute of Technology, Ireland.
Sezvineiwo, anogovera iro rimwe zuva rekuzvarwa neMwanakomana wake wekutanga Don Jazzy. Uye zvakare inobvuma kuda uye kupemberera kubudirira kweMwanakomana wake.
Mr Enebeli vakatumidza zvakare mwanakomana wavo 'The Beat King' nekuti anogara achitsvaga nzira nyowani dzekufambisa bhizimusi remimhanzi kumberi.
Zvimwe Zvizhinji nezvaAmai vaDon Jazzy:
A Proud mum wevana (4) yevana, achitaura nezve vaviri (2) vari mune indasitiri yemimhanzi. Anonzi Patience Enebeli. Iye wepasi rose Bhizinesi tycoon uye mambokadzi wedzinza reIgbo, sezvambotaurwa.
Don Jazzy mune yekudziya kumbundira mai vake.
SaVaCollins Enebeli, Amai vaDon, vanova Patience Enebeli, havana kunge vaine kusawirirana pamusoro peumwe wevana vavo. Vaigara vachitsigira Vabereki.
Zvimwe Zvizhinji nezveVana vaDon Jazzy:
Nekudaro, zvinogona kukufadza iwe kuti iyo Music guru ndiyo mukoma mukoma kune 'Oga Titus' crooner, D'Prince kana nani achiri kuzivikanwa saOmoba.
Mugadziri wemimhanzi-anokunda mubairo ane vana vatatu (3) vanun'una, James Enebeli Collins, Joy Solano (akaroora Solano), naCharles Collins Enebeli vanozivikanwawo se D'Prince.
Nekufamba kwenguva, ivo chete hanzvadzi yavo Joy haana kuve neakawanda midhiya kutariswa kana mukurumbira sehama dzake.
Nekudaro, James anomhanya Mavin Energy nepo D'prince ari muimbi ane mukurumbira uye muzvinabhizinesi. Joy akaroora anofara aine vana uye anogara muDublin, Ireland neake hubby.
Don Jazzy nevanun'una vake pamazuva ekukura kwake.
Zvimwe Zvakawanda Nezvehukama hwaDon Jazzy:
Mune chinyorwa pa Instagram, Mavin Boss, akaratidzazve nhengo yemhuri, Thomas Ogwuazor. Kunyangwe hukama hwehukama husiri pachena, Ogwuazor sekureva kwaDon anova ndiye 'mutambi wenhabvu chete mumhuri.
Don Jazzy, zvakare ari sekuru anodada nehama yake, Gabriel Okpuno-Okei. Dzimwe hama dzake dzinosanganisira iye Sekuru vanotaurwa zvakanyanya-nezve ivo vaakashanyira kuUK. Uye zvakare vana vake maSista vanova muzukuru wake (s) nemuzukuru (wavo).
Gabriel Okpuno-Okei nasekuru vake, Don Jazzy.
Don Jazzy Chitendero:
Iyi tsika zvino kuona vana vachidzedzereka mukutenda kwakasiyana nezvavanogovana vachikura. Nyaya yaDon Jazzy ndiyo yakasarudzika.
Akazvarwa ari nhengo yeThe Chisingaperi Chitsvene Kadhi reCherubim uye Seraphim Church uye yakaramba iri imwe kubvira.
Don Baba nehama dzake muCherubim uye Seraphim nguo.
Imwe nguva muna 2015, Mavin rekodhi mukuru Don Jazzy akagamuchira mubairo kubva kuchechi. Iyi rumbidzo akagada akagovana pane yake Twitter mubato.
Don Jazzy Hupenyu hweMunhu:
Muimbi ane hunyanzvi, anoita kunge ndiye ega muimbi ane mukurumbira wekuNigeria asina rwiyo rwega kune chikwereti chake, anowanzozivikanwa nemajee ake uye nehunhu hwemagariro. Iye ane vangangoita mamirioni 4.8 vateveri pa Twitter uye 9.3 mamirioni vateveri pa Instagram.
Jazzy tweets nezve yake nyowani crypto hobby kwenguva yakati rebei uye aratidzira ake ehupenyu machati. Asides kubva kurira, iye zvakare anoratidza kwake kutamba mafambiro kuburikidza neTikTok app. Zvisinei, Don Jazzy's Mavin Record Label haisati yakwana kuNigeria.
Don Jazzy mune yekumedza spree.
Don Jazzy Mararamiro:
Anoridza Record anogadzira zvine mutsindo mupfumi uye akabudirira kwazvo mugadziri wemimhanzi muNigeria uye kunyange neWest Africa zvakakura. Mavin Record rekodhi yake inokoshesa mari yakawanda. Kunze kwaizvozvo iye anoitawo mari kubva kune ake endorsement madhiri.
Iye ndiye mumiriri weLoya Milk, chibvumirano chakasainwa mu2012. Chiitiko ichi chakanzi chaive chakakosha mamirioni makumi mana eNaira naira iyo isati yapera.
Dzimwe gadziriro dzinosanganisira kuti neMTN inosvika mamirioni makumi mana emanairas, Samsung inosvika 40 miriyoni naira uye neKonga inonzi inokosha mamirioni gumi nemashanu naira.
Isu tinofungidzira iwe unoziva kuti iye anoraramawo hupenyu hwakaipisisa sevazhinji vane mukurumbira vane dzimba zhinji pamwe nemota dzekunze sePorsche 911, Bentley Continental, Flying Spur, Cadillac Escalade, Range Rover mutambo pakati pevamwe. Sekureva kwa Forbes, Don Jazzy ndiye 39 ane mukurumbira ane mukurumbira mu Africa.
Mavin Boss pamberi peBentley Continental Flying Spur yake. 📷: autojosh
Mari yaDon inofungidzirwa kunge $ 25 miriyoni, sekureva kweForbes (2020). Ane dzimba nhatu (3), imwe kuLekki, imwe muBanana Island, Lagos, uyezve kuLos Angeles, USA.
Chokwadi chaDon Jazzy:
Kunyangwe patinopedzisa nyaya yedu yehucheche uye chinyorwa cheBiography, mufaro wedu zvakare kupa ruzivo rwakananga iwe ungangodaro waisaziva maererano neye 39th ane simba kwazvo muAfrica. Pasina kumwe kunonoka, ngatitorei bhora kutenderera.
Chokwadi #1 - Kuonekwa kwemufirimu
Muna 2012, Ajereh akaonekwa mumuvhi raMoses Inwang Iyo yekupedzisira 3 Digits muNollywood. Inwang zvakare kukanda Ali Baba, AY, Nonso Diobi naDr Sid.
Chokwadi #2 - Kiredhiti semuimbi
Kunyangwe Don Jazzy asina kutora mbiri semuimbi, akaita zvekumashure mazwi evatambi vaakagadzira.
Makwimba aya anosanganisira kuimba kwaD'Banj, Sauce Kid, Dr SID, Ikechukwu, Kween, D'Prince, Jay-Z. Don Jazzy akapa kuimba kwezwi Kanye Kumadokero rwiyo Simudza Off naBeyoncé pane iyo Rinda Chigaro album.
Chokwadi #3 - Hupombwe Hwake uye Kudyidzana Kudyidzana
Muna Kurume 2012, Don Jazzy akasimbisa kushandisa yake Twitter account kuti D'banj akasiya boka. Chikonzero chaD'Banj chekusiya chakakonzerwa nemusiyano wezvido.
Zvakare, musi wa5 Mbudzi 2013, kumwezve kupokana nemunyori, Wande Coal, akasiya zita racho mazuva maviri gare gare.
Pekupedzisira, asi kwete zvaperera, hurukuro yeredhiyo neBeat FM muna Kukadzi 2018, Iyanya akazivisa kubuda kwake kubva kuMavin Records, achiti, kuti akasaina kuTemple Music, asi achave Mavin wehupenyu hwese. Yakanga isiri nyama yemombe.
Chokwadi #3 - Mibairo inogamuchirwa mukuremekedza inosanganisira zvinotevera
Nigerian Music Awards (2006) - Mugadziri wegore.
Nigerian Entertainment Mipiro (2007) - Mumhanzi Mugadziri wegore.
Iwo maHeadies 2011 - Mugadziri weGore reKunze Kwemwedzi, Mr Akapihwa uye Pop Chinhu.
Iyo Headies 2014 - Mugadziri weGore weDorobucci.
Guta People Varaidzo Mubayiro (2015) - yakasarudzika kuzivikanwa mubairo.
Iyo Beatz Mubairo TM (2019) - Nyowani Wekuwana Mugadziri.
Iyo 'Dorobucci' krooner mubairo paBeatz Mipiro 2019.
Chokwadi #4 - Makorokoto
Mavin Records akagamuchira kusarudzwa kwe Best Record Label yegore ku2013 City People Entertainment Awards. Chikwata chakakundawo chikamu chakataurwa pamusoro apa paguta ra2014 Guta reVaraidzo.
Chokwadi #5 - Marvins Simuka (The Believe muNigeria Project)
chirongwa ichi ndechemunhu wese anotenda kuNigeria, vhidhiyo yepamusoro-soro yakagadzirirwa chirongwa cheAnotenda muNigeria, naMarvin's Records. "Simuka" ndirwo rwiyo rwiyo rwe'Tenda muNigeria 'Project.
Don Jazzy's Biography Dhata
Zita rizere: Michael Collins Ajereh
Zita rekudanwa: Don Jazzy aka Don Baba J
Zuva rekuzvarwa: 26th yaNovember 1982
Nzvimbo yekuzvarirwa: Umuahia, Abia Nyika, Naijeriya
Nezvekuroorwa: Mumwe / Musikana (Kerie)
Baba: Collins Kana Mumwe Munhu Ajere Enebeli
Amai: Patience Enebeli
Vanun'una: James Enebeli Collins, Joy Solano naCharles Collins Enebeli (D'Prince)
Dzidzo: Ambrose Ali Yunivhesiti, Ekpoma, Nigeria (BBM)
Basa: Rekodhi Mugadziri, Muimbi, Rwiyo munyori uye muzvinabhizimusi
Mitauro: Pop, R & B, Afro pop uye African hip pop
Net Worth: $ 25 mamirioni (Forbes 2020)
Hobbies: Comedy, kuteerera Music, Social Media, Crypto kutengesa uye Kutamba zvemimhanzi Zviridzwa
Chitendero: ChiKristu (Eternal Order yeCherubim neSeraphim)
kukwirira: 5 '9 "
Social Media: Instagram (@donjazzy), Twitter (@ DONJAZZY), TikTok (@donjazzy) uye Facebook (Mavinboss)
Isu tinofungidzira kuti wakakuwana kuchinakidza, uchiverenga yedu Don Jazzy yehucheche nyaya. Isu takaona maitiro ake echinangwa uye kutsunga kwakapa mikana inodiwa-yaanoda kuti ave nyeredzi. Uye zvechokwadi, iwo mikana akawedzerwa zvizere.
Saka, ita zvakanaka kugovana ruzivo rwako nesu. Isu tinokuvimbisa iwe hwakawanda hwenyaya chokwadi neepamusoro-notch kunyatso uye kurongeka; mvura, huya upenye. Ramba wakabatana!